Sida Loogu Aqoonsado Fursadaha SEO-ga ee Boggaaga Si Loogu Hormariyo Darajada Natiijooyinka Raadinta Adoo Isticmaalaya Semrush | Martech Zone
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan ka caawiyay boqollaal urur inay dhisaan istiraatiijiyaddooda mawduucyada iyo hagaajinta aragtida guud ee mashiinka raadinta. Nidaamku waa mid si toos ah toosan u socda:
Performance - Hubso in boggooda ay si fiican u shaqeeyaan marka loo eego xawaaraha.
Device - Hubso in waayo-aragnimadooda degelku ka sarreeyo miisaska iyo gaar ahaan mobilka.
brandingeksperten - Hubso in boggoodu yahay mid soo jiidasho leh, oo si fudud loo isticmaali karo, isla markaana si joogto ah loogu calaamadeeyay faa'iidooyinkooda iyo kala duwanaanshahooda.
Content - Hubso inay haystaan ​​maktabad nuxur leh oo ay ku jiraan marxalad kasta oo safarada iibsadayaashooda, ayna u adeegsadaan warbaahin kasta bog ku habboon.
Wax-U-Yeedid - Hubso inay siiyaan martida waxa xiga ee ay ku sameynayaan bog kasta iyo qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Gudbinta - Hubso inay haystaan ​​istiraatiijiyad firfircoon si loo hubiyo in waxyaabaha ay ka kooban yihiin lagu wadaago internetka iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada, tusayaal tayo sare leh, warshado, iyo bogagga saamaynta leh.
Raadintu kaliya maahan soosaarida waxyaabaha, ee waa soo saarida waxa ugu tayada sareeya marka loo eego tartamayaashaada.
Waa kuwee Tartamayaashaada Raadinta?
Taasi waxay umuuqataa su’aal layaableh, laakiin kuwa kula tartamaya makiinadaha raadinta kaliya maahan shirkadaha leh alaabada iyo adeegyada tartamaya. Tartamayaashaada makiinadaha raadinta waa:
Websaydhada warshadaha ku tartamaya isla ereyada muhiimka ah isla markaana laga yaabo inay ku riixaan taraafikada tartamayaashaada.
Agaasimayaasha khadka tooska ah kuwaas oo ujeedadooda kaliya ay tahay inay kaa darajo sareeyaan adiga si lagugu qasbo inaad xayeysiiso iyaga.
Tixraac bogagga internetka sida Wikipedia oo leh awood qiimeyn raadin aan caadi ahayn.
Shabakadaha wararka taasi waxay kugula tartami kartaa shuruudahaaga calaamadeysan sababtoo ah mashiinka mashiinka raadinta.
Websaydhada waxbarashada laga yaabo inay leeyihiin fasalo ama koorsooyin isla mowduucyada ah. Goobaha waxbarashadu sidoo kale waxay leeyihiin awood aad u fiican sidoo kale.
warbaahinta bulshada boggaga isku dayaya inay si firfircoon ula macaamilaan macaamiishaada mustaqbalka si lagugu qasbo inaad xayeysiiso iyaga.
Websaydhada saamaynta ku leh kuwaas oo si firfircoon ula shaqeeya macaamiishaada mustaqbalka si ay u iibin karaan xayeysiinta ama ula macaamili karaan kuwa gacansaarka la leh.
Xaaladda, Martech Zone gabi ahaanba waa tartan la leh bixiyeyaal badan oo Martech ah marka ay timaado darajada iyo taraafikada. Si aan lacag ugu helo degelkeyga, waxaan u baahanahay inaan ku tartamo oo aan ku guuleysto ereyada muhiimka ah ee tartanka iyo taraafikada sare leh. Markii aan sidaa sameeyo, dad badan ayaa gujin doona xayeysiisyada boggeyga ama xiriiriyeyaasha xiriirka la leh - driving income. Had iyo jeerna, darajadaydu waxay u horseedaa shirkado kafaala qaada qoraallada iyo qaybaha si ay isugu dayaan oo u wadaan inbadan oo hogaamiya jihooyinka
Sideed ku Heleysaa Tartamayaashaada Raadinta?
In kasta oo aad u maleyn karto inaad sameyn kartid raadinta oo aad aragto cidda ku soo baxeysa natiijooyinka, taasi maahan hab weyn oo lagu garto cidda kula tartameysa. Sababta ayaa ah in mashiinnada raadinta ay shakhsiyeeyaan bogagga natiijada mashiinka raadinta (SERPs) adeegsadaha mashiinka wax raadinta - si jaad ah iyo juquraafi ahaanba.
Marka, haddii aad runti rabto inaad aqoonsato tartankaaga - waa inaad ka faa'iideysataa qalab sida oo kale ah Xeebaha kaas oo aruuriya oo bixiya sirdoonka iyo ka warbixinta ku saabsan natiijooyinka mashiinka raadinta.
Xeebaha ayaa kaa caawin kara inaad aqoonsato sida boggaagu u shaqeynayo guud ahaan ereyada muhiimka ah wuxuuna kaa caawinayaa inaad aqoonsato farqiga iyo fursadaha sida aad u horumarin karto guud ahaan darajadaada ka dhanka ah tartankaaga.
Tilaabada 1: Ku Fiiri Darajaynta Boggaaga Keyword
Talaabada ugu horeysa ee aan qaado marka aan sameynayo cilmi baaris tartan ah ayaa ah halka aan horay u qiimeeyay. Sababta tani waa mid iska fudud fudud… way ii fududahay inaan wax ka idhaahdo oo aan kor ugu kaco ereyada muhiimka ah ee aan horay ugu qoondeeyay halkii aan isku dayi lahaa inaan ku kala sarreeyo ereyada muhiimka ah ee aan boggeygu ka helin.
Miirayaasha aan adeegsado way kala duwan yihiin:
Position - Waxaan ku bilaabaa jagooyinka 4-10 maadaama aan horeyba ugu jiray bogga 1 iyo haddii aan heli karo booska 3, waan ogahay inaan si weyn u kordhin doono taraafikada.
Kala Duwanaanshaha Jagada - Waxaan jecelahay in aan fiiriyo jagooyinka aan horeyba ugu kordhinayay darajadayda bil ilaa bil maxaa yeelay taasi waxay ka dhigan tahay in waxa ku jira ay helayaan awood waxaana laga yaabaa inaan awood u yeesho inaan dib u habeeyo oo aan dib u dhiirrigeliyo si aan kor ugu sii qaado.
mugga - Haddii mugyadu ay ku jiraan tobanaan ama boqollaal kun, waa laga yaabaa inaan wax ka beddelo bogaggaas laakiin ma filayo natiijooyin degdeg ah. Natiijo ahaan, waxaan u muuqdaa inaan raadiyo mugga raadinta inta udhaxeysa 100 iyo 1,000 raadinta bishiiba.
Daraasad Kiis ah oo Ku Saabsan Bog Dejin ah
Waxaad ogaan doontaa inaan horay u socday Tartanka Maalinta Jacaylka. Taasi waxay ahayd eray keyword ah oo aan ka shaqeeyay bishii la soo dhaafay si aan ugu diyaar garoobo Suuqgeyaal cilmi baaris ka waday tartamada warbaahinta bulshada… wayna shaqeysay! Waxaan helay kumannaan booqashooyin ah anigoo ku wanaajinaya maqaal duug ah oo aan cusboonaysiinayo xogta iyo sawirada ku yaal. Xitaa waxaan ku fiicnaaday boostada si aan si fiican ugu bartilmaameedsado ereyada muhiimka ah, anigoo u beddelaya "valentines-day-campaign" "valentines-day-social-media-tartamada".
Sanadkii la soo dhaafey, waxaan ka helay ilaa 27 booqasho oo ka yimid matoorada raadinta intii u dhaxeysay 1-dii ilaa 15-kii Febraayo. Sannadkan, waxaan ka helay 905 booqashooyin makiinadaha wax lagu raadiyo. Taasi waa kor u kac wanaagsan ee taraafikada dabiiciga ah ee hagaajinta yar ee ka kooban boggaas.
Talaabada 2: Aqoonsiga Fursada Furaha
Ereyga ugu horreeya ee liiskaas runti waa summad, sidaa darteed kalsooni kuma qabo inaan si wanaagsan u kala saraysanayo ama aan ku guuleysanayo taraafikadaas. Haddii qof uu raadinayo Acquire.io… waxay u badan tahay inay rabaan websaydhka dhabta ah.
Si kastaba ha noqotee, erayga labaad - maktabadda - waa mid aan gabi ahaanba xiisaynayo darajada sifiican. Waxay udub dhexaad u tahay adeegyadayda ganacsi waana ku faraxsanahay inaan ka caawiyo suuqleyda inay noqdaan kuwo waxtar badan oo wax ku ool leh wax soo saarkooda si ay u wadaan natiijooyinka suuqgeynta.
TALO: Boggaas horey miyaa loogu qoraa ereyada muhiimka ah ee la xiriira?
Ha iloobin inaad dhab ahaantii dhaawici karto guud ahaan taraafikadaada raadinta haddii aad qaadatid bog darajo sare leh oo aad baabi'iso ku habboonaanta ereyga gaarka ah. Marka, waxa labaad ee aan sameeyo ayaa ah waxa kale oo boggaas gaarka ahi u qoondeeyo adoo gujinaya URL-ka ku jira Xeebaha warbixin. Waan ka nadiifiyaa dhamaan shaandheeyeyaashayda ka dibna liiska ayaan ku kala saaraa jagada.
Marka… tani way fiicantahay. Intii aan ku qiimeeyay dhismaha iyo abuurista maktabad maktabad, oo si cad u qaadanaya darajadayda maktabadda waxay u kaxayn doontaa taraafikada bartayada.
Sidoo kale u fiirso, Tilmaamaha SERP in ay jiraan jajabyo muuqaal ah, fiidiyowyo, iyo dib u eegis. Waxaan rabaa inaan arko haddii aan ku daray wax kasta oo ka caawin kara maqaalkeyga horeyba u safnaa.
Talaabada 3: Aqoonsiga My SEO Competitors
Haddaan gujiyo maktabadda sadarka koowaad, hadda waxaan arki karaa cidda ila tartameysa ee kujira bogagga natiijooyinka mashiinka raadinta:
Talaabada 4: Isbarbar dhig Mawduucaaga iyo Mawduucooda
Adiga oo adeegsanaya sifooyinka SERP ka hor iyo falanqaynta mid kasta oo ka mid ah bogaggan, hadda waxaan la imaan karaa talooyin ku saabsan sida loo hagaajiyo nuxurka guud ee qoraalkeyga si ka wanaagsan loogu qoro maktabadda, iyo sidoo kale cadee fursadaha qaar sida loo dhiirrigeliyo si loo wado qaar ka mid ah backlinks… taas oo aakhirka iga sii fiicnaan doonta.
Xaqiiqdii waxaan leeyahay backlinks badan oo boggeyga ah marka loo eego dhowr bog oo aniga iga sarreeya. Dabcan, qaar ka mid ah cinwaanadaas ayaa leh awood ka weyn sidaa darteed shaqadayda waa la ii jaray. Qodobka ugu sarreeya ee boggaas ayaa u muuqda in lagu qoray 2013, sidaa darteed xitaa waxaan aad ugu kalsoonahay inaan wadi karo natiijooyin wanaagsan. Iyo, falanqaynta liiska qodobbada… qaarkood iyaga xitaa kuma xirna erayga muhiimka ah gabi ahaanba.
Tallaabada 5: Hagaajinta Mawduucaaga
Aynu wajahno article maqaalkeygu ma ahan kan ugu weyn… marka waa waqtigii si dhab ah loo xoojin lahaa. Xaaladdan oo kale, waxaan aaminsanahay inaan awoodo:
Tayaynta horyaalka ee maqaalka.
Geli sheeko dheeri ah muuqaal muuqaal ah taasi waxay ka kaxayn doontaa taraafikada badan kobcinta warbaahinta bulshada.
Add a video halkaas oo aan ku sharaxo istaraatiijiyada guud ahaan.
Ku dar intaa jaantusyada gudahood qodobka.
Inbadan geliya faahfaahsan hareeraha safarka iibsadayaasha iyo sida nuxurkeedu u kaxeeyo hawlgal badan iyo beddelaad.
Xaaladdan oo kale, waxaan aaminsanahay cusbooneysiinta waxyaabaha ku jira iyo dib-u-habeynta baraha bulshada ay ku filan tahay in si dhab ah loo wado natiijooyinka raadinta wanaagsan. Mawjadaha cusub ee dadka akhrinaya waxyaabaha ku jira isla markaana ku wadaagaya khadka tooska ah waxay Google u muujinayaan tilmaamayaasha lagama maarmaanka u ah in waxa ku jira ay ka sareeyaan, cusub yihiin, ayna tahay in si ka wanaagsan loo kala sarreeyo.
Tallaabada 6: Dib-u-daabicis iyo Kor-u-qaad Mawduucaaga
Haddii maqaalkaagu ku yaal bartaada, ha ka baqin inaad dib u daabacdo waxyaabaha cusub sida cusub, adigoo isla URL-gaaga iyo slug ku haya. Sababtoo ah horay ayaad ujirtay, uma baahnid inaad beddesho URL-ka boggaaga!
Iyo, sida ugu dhakhsaha badan ee dib loo daabaco, waxaad ubaahantahay inaad qaybiso oo aad kobciso waxyaabaha kujira joornaalkaaga emailka, saxiixyada emaylka, iyo dhammaan astaamahaaga warbaahinta bulshada.
Tilaabada 7: Daawo Falanqayntaada Iyo Xeebaha!
Waxaan si caadi ah u arkaa kor u kac degdeg ah booqashooyinka markii aan dib u daabaco oo aan dhiirrigeliyo waxa ku jira laakiin ma ahan isbadal deg deg ah qiimeynta guud. Caadi ahaan dib ayaan u booqdaa Xeebaha in 2 in todobaad 3 si loo arko sida isbeddeladaydu u saameeyeen darajada guud ee cinwaankaas gaarka ah.
Tani waa istiraatiijiyad guuleysata oo aan usbuuc walba usameeyo macaamiishayda… waana wax lala yaabo sida ay u shaqeyso.
Haddii aad dhab ka tahay ka faa'iideysiga waxyaabaha ku kaxeeya koritaanka dabiiciga, hubi inaad iska hubiso Xeebaha's Qalabka Suuqgeynta Mawduuca halkaas oo aad ka qorsheyn karto, ku qori karto, kuna falanqeyn karto waxyaabaha aad ka kooban tahay hal meel.
The Xeebaha Platform Suuq-geynta Mawduuca wuxuu bixiyaa xalal fara badan oo loogu talagalay sameynta istiraatiijiyad guul leh iyo abuurista waxyaabo kaqeyb gala dhagaystayaashaada. Isku dar hal-abuurka iyo gorfaynta talaabo kasta oo socodkaaga shaqada ah.
Semrush ayaa dib loo habeeyay iyo iyaga keyword database wuxuu ka koray 17.6B ilaa 20B. Laba sano ka hor kaliya waxaa ku jiray ereyada muhiimka ah ee 2B - taasi waa 10x koritaan! Waxay sidoo kale hagaajiyeen qorshayaashooda:
Pro - Shirkado madaxbanaan, kuwa bilaaba, iyo kuwa guryaha wax ku iibiya ayaa adeegsada xirmadaan si ay u kobciyaan mashaariicdooda SEO, PPC, iyo SMM.
Isku day Xeebaha Pro Bilaash ah!
Guru - Wakaaladaha ganacsiga yaryar iyo kuwa suuqgeynta ayaa adeegsanaya xirmadan. Waxay leedahay dhammaan astaamaha pro marka lagu daro madal suuqgeynta waxyaabaha laga helo, xog taariikhi ah, iyo isdhexgalka Google Data Studio.
Isku day Xeebaha Guru Bilaash!
Business - Wakaaladaha, mashaariicda ganacsiga e-commerce, iyo boggag waaweyn ayaa adeegsanaya xirmadan. Waxaa ku jira marin u helka API, wuxuu kordhiyay xadka iyo xulashada wadaagida, iyo Share of Voice warbixinta.
Subscribe Dheh Xeebaha Business
Shaacinta: Anigu waxaan ku xidhan ahay Xeebaha oo waxaan isticmaalayaa isku xirnaantooda ku xiran maqaalkan.
Tags: falanqaynta darajaynta waxyaabahasida loo hagaajiyo darajadasida loo baaro tartamayaasha khadka tooska ahfursadaha raadinta dabiiciga ahfalanqaynta mashiinka raadintabogga natiijooyinka raadinta enginenatiijooyinka raadintasemrushfalanqaynta seofalanqaynta tartanka seofursadaha seokala saraynta